Mijoro karazana Wireless Charger SW14
Mampiasa ny teknolojia fanaraha-maso mandeha ho azy efa mandroso indrindra ity tobim-piantsonana 2-in-1 ity. Miaraka amin'ny fiasa isan-karazany, toy ny overcurrent, overcharge, overvoltage, overheat, sns ary ny fiasan'ny fanaraha-maso ny mari-pana, mandeha ho azy, ny zavatra vahiny sy ny zavatra metaly famantarana, sns mba hahafahanao miaina Wireless fiampangana amin'ny fiadanan-tsaina tanteraka.
Ampidino ny banky magnetika Wireless PBW01
Ity dia banky herinaratra tsy misy tariby magnetika, ny fahaiza-manao dia 5000 mAh (azo amboarina 10000 mAh), 1 * seranan-tsambo Type-C dia 18W, 1 * USB dia 18W, 15W tsy misy tariby.
Mijoro karazana Wireless Charger SW15
Charger tsy misy tariby multifunction ho an'ny iPhone 12, TWS ary iWatch. Misy fiarovana maro, ohatra, fiarovana mahery vaika, fiarovana mahery vaika, fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra ary ny fiasan'ny vatana vahiny, dia afaka misoroka ny fahasimban'ny bateria amin'ny fandoavana be loatra.
Mijoro karazana Wireless Charger SW16
Ity charger tsy misy tariby 3-in-1 ity dia mijoro ho an'ny finday Qi-Enabled haingana, Watch Galaxy, Galaxy Buds miaraka amin'izay, tsy mila manahy momba ireo tariby fiampangana isan-karazany eo amin'ny fiainanao, mahatonga ny birao mangatsiatsiaka sy milamina!
Ity dia charger tsy misy tariby lavitr'ezaka azo apetraka amin'ny fanaka tsy metaly manomboka amin'ny 15mm ka hatramin'ny 30mm matevina, ao anatin'izany ny latabatra, latabatra, akanjo ary countertops.
15W andriamby fiampangana tsy misy tariby. Misy fiarovana maro, ohatra, fiarovana mahery vaika, fiarovana mahery vaika, fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra ary ny fiasan'ny vatana vahiny, dia afaka misoroka ny fahasimban'ny bateria amin'ny fandoavana be loatra.